ပြန်လည်ရရှိလာတဲ့ အနုပညာကြေးလေးနဲ့ (၂၃)လမ်းမှာ ဈေးရောင်းတဲ့အဖွားဆီ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ယုန်လေး – Burmese.asia
Homepage / Celebrity / ပြန်လည်ရရှိလာတဲ့ အနုပညာကြေးလေးနဲ့ (၂၃)လမ်းမှာ ဈေးရောင်းတဲ့အဖွားဆီ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ယုန်လေး
ပြန်လည်ရရှိလာတဲ့ အနုပညာကြေးလေးနဲ့ (၂၃)လမ်းမှာ ဈေးရောင်းတဲ့အဖွားဆီ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ယုန်လေး
By Myo Min HtetPosted on August 21, 2020
ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေ သီချင်း MV နဲကပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေ၊ပြဿနာများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုမှုရပ်နားခဲ့တာဖြစ်ပြီး မနေ့ကတော့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာကနေ အရင်လိုပဲအလုပ်တွေပြန်စလုပ်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းပြောထားပါတယ်။ယုန်လေးဟာ အလုပ်ပြန်လုပ်တော့မယ်အကြောင်းပြောပြီတာနဲ့ အလုပ်လာရောက်အပ်တဲ့သူကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားပါတယ်။
ယုန်လေးဟာ ယနေ့မှာတော့ ပြန်လည်ရရှိလာတဲ့ အနုပညာကြေးလေးနဲ့ (၂၃)လမ်းမှာ ဈေးရောင်းတဲ့အဖွားဆီ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကို “မနေ့က အလုပ်လေးတွေ ပြန်စရတယ် ရရချင်း လှူချင်တာနဲ့ Cb ကညီလေးတစ်ယောက်ပို့ထားတဲ့ Link ကိုဝင်ကြည့်ပြီး ချက်ချင်းသွားတယ် . ည(၁၀)နာရီ ဆိုတော့ အဖွားပြန်သွားတယ် .မနက်(၁၂) လောက်ဆိုရောက်ပြီ ပြောကျတော့ မနက် (၁၂) ရောက်တယ် . အဖွား မရောက်သေးဘူး .အဖွားကို (၃) နာရီမှာ နောက်တစ်ခါက် ထပ်သွားပြီး ကန်တော့ခဲ့ပါတယ်” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ယုန်လေးကတော့ လက်ထဲပါတဲ့ (၅)သိန်းလုံးကို လမ်းမှာတွေ့သမျှ ခက်ခက်ခဲခဲပိုက်ဆံရှာနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကို လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့။ပရိသတ်ကြီးရေ ယုန်လေးကတော့ ပထမဆုံပြန်လည်ရရှိတဲ့ အနုပညာကြေးတွေကို ချက်ချင်းလိုအပ်သူတွေကိုလှူဒါန်းခဲ့တာနော်။
Previous post တင့္ေတာင္း တင့္တယ္ထားႏိုင္ရင္ တစ္ခါတည္း ေယာက်ာ္းယူမယ္ဆိုတဲ့ ခင္ရတီသင္း
Next post ကိုရိုနာထပ် (၁၀)ဆ ကြမ်းတဲ့ Virus တွေ့နေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကို အထူဂရုစိုက်ဖို့ ပြောလာတဲ့ ပိုပို